Bariga Dhexe - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Bariga dhexe)
Bariga Dhexe (; ) waa mandaqad Juquraafiyeed Kakooban Wadamada Galbeedka Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. Mandaqada Bariga Dhexe waxa ay Hadhaysaa badaha Badacas Gacanka Carabta Bada Dhexe iyo Bada Carbeed
Kalmada Bariga DhexeEdit
Magacani waxa uu tilaamayaa xadaaradaha iyo taariikhda mandaqadan.magacan waxa labixiyaay xiligii ay nimankii juquraafaystayaasha ahaa caalamka u qaybiyeen mandaqado.taasina waxa ay ahayd xili aad u fog. Bariga Dhexe waa mid kamida meelaha caalmka ugu Rabshadaha badan
Dawladaha Bariga DhexeEdit
Coordinates: 29°00′00″N 41°00′00″E﻿ / ﻿29.0000°N 41.0000°E﻿ / 29.0000; 41.0000
Kaarka Bariga Dhexe
Bariga Dhexe waxaa la isku dhahaa ama ee u badantahay dhulka ee carabta degto, waxeena ku taalaa Koonfurta Galbeed ee qaarada Aasiya iyo Woqooyiga qaarada Afrika. Wadamada ee bariga dhexe ka koobantahay waxaa ka mid ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bariga_Dhexe&oldid=191863"
Last edited on 3 May 2019, at 06:43
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 May 2019, marka ee eheed 06:43.